Home Wararka Habraaca Amniga doorashada Madaxweynaha oo la soo saaray
Habraaca Amniga doorashada Madaxweynaha oo la soo saaray
Guddiga isku-dhafka ah ee doorashada Madaxweynaha oo laga soo kala xulay Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray Habraaca Amniga Doorashada Madaxwaynaha ee dhaceysa 15 Bishaan.
Qoraal uu ku saxiixan yahay Guddoomiyaha Guddiga Cabdiqani Geelle Maxamed ayaa lagu sheegay in Guddiga uu go’aamiyay in amniga Teendhada lagu qabanayo doorashada gebi
ahaanba lagu wareejjyo dhamaan albaabada kala duwan ee ay teendhadu leedahay ciidamada
ATMIS) maalamaha hadal-jeedinta murashaxiinta xilka Madaxwaynaha JFS oo ku beegan 11 iyo 12 May 2022 iyo maalinta doornshada Madaxwayaha JFS oo ku beegan 15 May 2022.
In Gudaha Teendhada ay ka shaqeeynayaan 22 askari oo Ciidan boolis ka ah kuwaas oo la shaqeynaya Guddiga Pratacol- ka.
In Albaabada la oggol yahay in laga soo galo teendhada Afisiyooni ay kala
vihiin: School Policia/Marina Gate, Main Gate iyo
Madina Gate, iyada oo Dadka ka soo qayb-galaya hadaljeedinta iyo doorashadaba loo qaybiyay
Dhammaan Musharasxiinta waxay kasoo galayan albabka Madina Gate halkaas oo ay kaga soo tagayaan gawaarida iyo Ciidanka hubeysan ee la socda. waxaa loogu diyaariyay gawaari
VIP ah oo ka soo qadeysa Musharax walba iyo inta qof ee loo oggol yahay.
Dhammaan Xildhibanada/Senatorada, Marti-sharafta, Shaqaalaha Labada Aqal ee
Baarlamaanka Federaallka iyo Saxaafaddu waxey kasoo galaayan dhinaca School
policia/Marina Gate lyo Main Gate.
Saxaafadda waxaa loo diyaariyay hool gaar ah oo leh shaashado ay ka tabiyaan wararka
Musharaxa xilka Madaxweynaha JFS ee haatan xilka haya waxaa loo oggol yahay in uu
hoolka la soo galo kaliya saddex qof oo kala ah:-
Askariga astaanta Calanka
Qof u tiriya codadka.
Musharaxiinta ah Madaxweynayaal hore waxaa loo oggol yahay in ay hoolka la soo galaan
2 qof kaliyah oo kala ah hal qof hab-mamus ah iyo hal qof oo codadka u tiriya musharaxa
Dhamaan Musharaxinta kale ee u tartamaya xilka Madaxweynaha JFS waxaa loo oggol
yahay in musharax walba uu gudaha hoolka teendhada la soo gali karo hal qof oo kaliayah
Dhamman musharaxiintu waxay kasoo galayaan albaabka V.IP ce Tecndhada.
Musharaxinta u taagan xilka Madasweyne iyo Ciidanka hubeysan ee la socda, waxay kusoo
reebayaan albaabka Madina Gate, halkaas waxaa loogu diyaariyay gawaari V.l.P ka soo
qaadeysa musharaxa iyo inta qof ee loo oggol yahay.
Dhammaaan Xildhibanada/Senatorada, Marti-Sharafta, Shaqaalaha BFS iyo Saxafadduba
waxay kasoo galayaan albaabka School Policia/Marinn Gate iyo Main Gate halkaas waxaa
loogu diyaariyay basas iyo baabur geeysa albaabka wayn ee Teendhada Ciidamada Cirka ee Afisiyooni laga galo.
Dhammaan albaabada laga soo galo teendhada afisyooni iyo goobaha kale ee lagu baaro
waxaa la dhigay magacyada Xildhibanada/Senatorada oo u qoran hab Alphabetic ah.
Sidoo kale albaabada laga soo galo teendhada afisyooni iyo goobaha kale ee la isku hubiyo
waxaa la dhigay magacyada shaqaalaha, saxaafadda iyo marti- sharafta kale
Waxa waajib ah in qof walba uu wato kaar aqoonsi (ID card).
Waxaa waajib ah in qof walba uu hoggaansamo tilmaamaha ay bixinayaan Ciidamada
sugaya amniga, isla markaana uu gof walbo uu maro baaritaan ivo mashiinad maraayo.
Previous articleWada-hadallo laga dhex bilaabay Deni & kuxigeenkiisa Karaash
Next article[DEG DEG] Qarax lagu beegsaday Taliyaha Booliska G. Banaadir Farxaan Qaroole
Masuuliyiin looxiray qaraxii kadhacay lubnaan